Bas sidey dad rayid ah oo lagu rasaaseeyey meel aan ka fogayn Ceel Waaq | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Bas sidey dad rayid ah oo lagu rasaaseeyey meel aan ka fogayn...
Bas sidey dad rayid ah oo lagu rasaaseeyey meel aan ka fogayn Ceel Waaq
(Mandheera) 07 Okt 2020 – Inta la sheegay ugu yaraan 8 qofood ayaa ku dhaawacay kaddib markii weerar lagu qaaday gaari bas ah oo u kala socdey magaalooyinka Mandheera iyo Nairobi ee dalka Kenya.
Weerarkan loo gaystey dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan oo la sheegay inay fuliyeen koox ka tirsan Al-Shabaab, ayaa dadka ku dhaawacmay 4 ka mid ihi ay garaab yihiin ama aad u daran yihiin.
Gaariga la weeraray ayaa ayaa isla markii aanu wax badan kasii fogaanin Mandheera, marka la eego fogaanta halka uu u socdey ee Nairobi, ayaa waxaa loosii galay meel u dhaw degaan lagu magacaabo Kotilo oo u dhaw degmada Ceelwaaq, oo ah meesha lagu rasaaseeyay.
Waxaa weerarka fuliyey qiyaastii 10 nin oo hubaysan, sida ay qiyaaseen dadka rayidka ah ee weerarka lagu qaaday oo saxaafadda maxalliga ah war siiyey.
Dadka weerarka ku dhaawacmay ayaa loola cararay isbitaalka Degmada Ceelwaaq, oo haatan lagula tacaalayo, iyadoo loo baahan yahay kaalmo caafimaad oo deg deg ah maadaama aanu mugga isbitaalku qaadi karin dhaawacyo badan oo noocan ah.
Arrintan ayaa ka mid ah dhibaatooyinka haysta dadka rayidka ah, iyadoo ay ciidamada KDF sidoo kale waxyeelleeyaan dadka rayidka ah oo aanay jirin cid u naxaysa ama ilaalinaysa xeerarka ka degsan biri ma gaydada.
Previous articleMaamul-goboleedka Tigraay miyaa doonaya inuu Itoobiya ka go’o?!! (Daawo)
Next articleKenya oo ciyaarteeda uga raysay DF Somalia (Jaadka oo Somalia ku taga si aysan dani ugu jirin dadka & dowladda)